यी संसारकै 10 शक्तिशाली देश। जहाँ कब्जा गर्न असम्भव छ। हाम्रो देश नेपाल पर्छ कि पर्दैन त ? भिडियो हेर्नुहोस्) – Dailny NpNews
यी संसारकै 10 शक्तिशाली देश। जहाँ कब्जा गर्न असम्भव छ। हाम्रो देश नेपाल पर्छ कि पर्दैन त ? भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८ समय: १७:५४:२८
यो पनि पढ्नुहोस…कब्जियतको समस्या छ ? यी पाँच कुरा भूलेर पनि नखानुहोस्